इजलासको चासोः सरकारकाे विकल्प नभए बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? (भीमार्जुन आचार्यसँगको सवालजवाफसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
इजलासको चासोः सरकारकाे विकल्प नभए बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? (भीमार्जुन आचार्यसँगको सवालजवाफसहित)
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कानुनी आधारबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दावीको व्याख्यामा चासो दिएको छ । सरकारको विकल्प नभएको अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइन्छ या पाईदैन भन्ने प्रश्नको छिनोफानोमा इजलासले चासो देखाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा सरकार गठनको अर्को विकल्प नभएकोले विघटन गरेको तर्क दिँदै आएका छन् ।
आइतबारका दिन अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरलले बहस गरिहँदा इजलासकले यो विषयमा नै बढी प्रश्न गरेको थियो ।
सुनुवाइको पहिलो दिनदेखि नै ‘सरकारको विकल्प’ को सवालमा ज्यादा रुचि राख्दै आएको देखिन्छ । खासगरी, प्रधानन्यायाधीश जबराले अपवादबाहेक बहस गर्ने हरेक कानुन व्यवसायीलाई ‘बहुमत प्राप्त दलको नेताले म सरकार चलाउँदिनँ, निर्वाचनमा जान्छु भन्न किन नपाउने ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दलको विकल्पमा प्रतिनिधिसभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना थियो कि थिएन भनेरसमेत प्रश्न सोधिरहेका छन् । गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या र उनीहरूको नामावलीसमेत मागेको थियो । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव र दलीय अंकगणित केलाउन यो विवरण मागिएको हो । किनभने सत्तापक्षले सरकार ढलेको भए अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नभएको दाबी गरिरहेको थियो ।
पढ्नुस बार र बेन्चबीचको सवालजवाफ
भीमार्जुन : श्रीमान् ५३ र ५४ को कुरा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको हो। अहिलेको ७६(७) भनेको कस्तो अवस्थामा वाध्यात्मक विघटन भन्ने छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अवस्था छैन।
भीमार्जुन : प्रोसेसमा जानुपर्यो नी श्रीमान्। पहिलेको संविधान अनुसार पिएमले पाउँथे। अहिले पाउँदैन।
सपना : सिच्युएसन एबल्ट हुनुपर्यो। एबल्ट भइसकेपछि त्यो धाराको एक्युनरी मान्ने हो?